စိတ်ကူးပဲ ယဉ်နေတော့မှာလား – Live the Dream
စိတ်ကူးယဉ်ကောင်းလို့ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ဖူးလား? ကျွန်တော်ကတော့ ဒီမနက်ရေချိုးရင်းနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တာ..ခေါင်းလျှော်ရည်ကို မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့မှားပြီး မျက်နှာသစ်မိလို့ အော် ငါ့နှယ် စိတ်ကူးယဉ်တာလွန်ရောလို့။ ကျွန်တော့်လို ဘဝတူလေးတွေရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်လတစ်လ ထီထိုးထားပြီး လေထဲတိုက်ဆောက်နေရတာ အမော။ Crush ကို စိတ်ကူးယဉ်ရတာလည်း အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်လို့ (တစ်ခါမှလည်းပြန်မကြိုက်ပါဘူး..)။ အားလုံးက စိတ်ကူးယဉ်သမားတွေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာက ပျော်စရာကောင်းလှပါပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာလည်း ဆိုးကျိုးတွေရှိပြန်ပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်လာလာမလာလာ စိတ်ကူးယဉ်ရတာ အရသာ တစ်ခုဆိုတော့ မတားရက်ပါဘူး.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ကူးယဉ်နေဆဲပါ။ အသက်ကြီးသွားလေ လူတွေရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေနည်းသွားတာဖြစ်လို့ ငယ်တုန်းမိုလို့ ဆက်လက်စိတ်ကူးယဉ်ဦးမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆေးစွဲသလို စွဲနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဆိုးကျိုးနည်းဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်. ဝမ်းသာစရာပါပဲ ဆိုကျိုးနည်းတဲ့စိတ်ကူးယဉ်တဲ့နည်းတွေ မင်မင်လက်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။ သိချင်ရင် လိုက်ခဲ့တော့….ဖတ်ပြီးသွားရင်လည်း ကိုကိုစိတ်ကူး မမစိတ်ကူးတို့ရဲ့ လွဲခဲ့တဲ့အလွဲတွေကို Comment မှာ ပျော်စရာလေးအဖြစ် မန့်သွားပေးပါဦးနော်.. တူတူရယ်ကြမယ်။
ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကူးယဉ်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုပဲ ဦးတည်တာများပါတယ်။ ပြောရရင် စကြာင်္ဝဠာရဲ့ ဗဟိုချက်က ကိုယ်ပေါ့။ စိတ်ကူးထဲမှာ ကိုယ်က ဘယ်သူ၊ ဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေတာ၊ လူတွေအားလုံးကိုယ့်ကို ဘယ်လိုမြင်နေမှာ စသဖြင့် အလှပဆုံးကမ္ဘာမှာ ကိုယ်ဟာ အကောင်းဆုံး လိတ်တက် ဗားရှင်းလူသား၊ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကလည်း ပြည့်စုံလွန်းတယ် သာယာချက်ပဲ။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ မပြည့်စုံမှုကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး ပြည့်စုံနေသယောင်ယောင် စိတ်ကူးထဲမှာ ရှိနေတာပါ။ ရှေးလာမယ့်အရာတွေမှာ အမှားပါမှာစိုးရိမ်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့် ပြည့်စုံလွန်းတဲ့အနာဂတ်ကို တွေးနေမိတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအတွေးမျိုးက သိနေရင်တောင် ရပ်တန့်ဖို့ခက်တဲ့အတွေးမျိုး၊ ထပ်တစ်လဲလဲ တွေးနေမိတဲ့အတွေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရလာဒ်အနေနဲ့ ပြဿနာအပေါ်အာရုံစိုက်ဖြေရှင်းဖို့ကို နှောင့်ယှက်တတ်သလို ၊ တစ်ခုခုဖြေရှင်းဖို့ဆို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာပြီး ရင်မဆိုင်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြောင့် ဒီလို စားမြုံ့ပြန်တတ်တဲ့စိတ်ကူးယဉ် အတွေးတွေ ဝင်လာရင်တော့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်။
၂။ ရှောင်ပြေးဖို့ စိတ်မကူးနဲ့
ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခု၊ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာတစ်ခု၊ ပြဿနာတစ်ခုကို စိတ်ကူးယဉ်ြဖေရှင်းခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခဏတာဖြေဖျောက်ပေးနိုင်သလို ကိုယ်မလိုချင်တဲ့အခြေအနေကနေ ခဏတာပုန်းရှောင်နေခွင့် ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိတော့ မဟုတ်တဲ့အတွက် အတွေးမလွန်အောင်လည်း ဘရိတ်အုတ်တတ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားမှ ကိုယ်မလက်ခံတတ်ရင်၊ ကိုယ့်ပြဿနာကို မှ မဖြေရှင်းချင်ရင် ဒါက မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာသိရပါမယ်။ မှန်ကန်တဲ့အဖြေက ကိုယ့်ကိုကို အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံတတ်ဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိအဖြစ်အပျက်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိုဗာတင်းမဖြစ်ခင် ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကို သတိရှိရှိ ရပ်တန့်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူတွေနဲ့ စကားပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ အာရုံလွှဲလိုက်ပါနော်။ ဦးနှောက်ရဲ့ ခဏတာ စိတ်ကူးယဉ်မှုဖြေရှင်းမှုတွေကို နဲ့ ရှောင်ပြေးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့နော်။
၃။ Creation ကောင်းတယ်
ဆိုးကျိုးတွေကိုဖတ်ပြီး စိတ်ပျက်မသွားပါနဲ့.. စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေအလိုက် ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရှိပြန်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ တီထွင်မှုအသစ်တွေ၊ Idea အသစ်တွေကို စိတ်ကူးယဉ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဘောင်တွေက အကုန်ပျောက်ကုန်တာကြောင့် စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကနေ ဆန်းပြားတဲ့ Idea အသစ်တွေကိုရရှိစေပါတယ်။ စတိဗ်ဂျော့ ကိုပဲကြည့်လေ။ တစ်ကိုယ်ရည်သုံးကွန်ပြူတာကို တီထွင်ပြီး နည်းပညာနယ်ပယ်မှာအပြောင်းအလဲအများကြီးဖြစ်စေချင်တာက လူတွေ လက်မခံနိုင်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ရူးသွပ်မှုတစ်ခုဆိုပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာဖြစ်လာခဲ့တာပဲလေ။ ကိုယ့်ကို Creative ဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကို ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးမှာ ၊ အလုပ်ခွင်မှာ ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ကြပါစေနော်။
Relax တစ်ခု အနေနဲ့သာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ညားတဲ့စိတ်ကူးမျိုး၊ မော်ဒိုက်ကမ်းခြေမှာ မိသားစုလိုက် ရေကူးအပန်းဖြေတဲ့စိတ်ကူးမျိုး၊ ငွေရေးကြေးရေးဂရုစိုက်စရာမလိုပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးပတ်နေတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုမျိုးတွေက တွေက ထ ကချင်လောက်အောင် ပျော်စရာကြီးပါ။ စိတ်ကူးထဲမှာ ပျော်စရာကောပေင်းမဲ့ ကိုယ့်ဘဝက ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ကိုင်ချင်တာက မနေ့တစ်နေ့ကထွက်တဲ့ Apple product စားစရာကတော့ ဆန်မရှိဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုစိတ်ကူးတွေက ကိုယ့်ကို Entertain လုပ်တော့ တစ်နေ့ကို နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးယဉ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်အခါရယ်လို့သတ်မှတ်ထားရသလို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း လိုတာပေါ့။ ဥပမာ တစ်နေကုန်ထိုင်စားနေပြီး ဝိတ်ကျတယ်လို့ပဲ စိတ်ကူးယဉ်နေလို့မရဘူးလေ။ ဝိတ်ကျချင်တယ်ဆိုရင်လည်း စွတ်စားတာတွေလျှော့ပြီး ဝိတ်ကျအောင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမှာပေါ့။ ကိုယ်က ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ပညာတွေရှာ၊အလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ရမှာပေါ့ ဂိမ်းပဲဆော့နေလို့မရဘူးနော်။ ကိုယ်က စိတ်ကူးပဲယဉ်နေတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သမားတစ်ယောက်မဖြစ်ဖို့တော့ အရေးကြီးတယ်နော်။ မင်မင်ကတော့ Crush ကို ဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ် ခ်ခ်